"Nampahorina Izy, nefa nanetry tena ka tsy niloa-bava, dia tahaka ny zanak’ondry entina hovonoina, sy tahaka ny ondrivavy izay moana eo anatrehan’ny mpanety azy -eny, tsy niloa-bava Izy." Isaia 53:7
Tamin’ny fitsarana an’i Jesosy, ireo izay nahafantatra ny Soratra Masina dia tokony ho nahatsiaro ny faminaniana mikasika ny Mpanompon’i Jehovah, ampahatsiahivin’ny teny omena antsika androany ; ary nahafantatra ny Soratra Masina ireo mpitondra fivavahana tompon’andraikitry ny nahafatesany.
Izany fanginan’ny Mpanompon’i Jehovah izany koa no ambaran’ny mpanao salamo hoe : “Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava ; eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo am-bavany” (Salamo 38:13-14). “Mangina aho ka tsy miloa-bava ; fa Ianao no nanao izao” (Salamo 39:9). Ireo andinin-tSoratra Masina milaza faminaniana ireo dia manambara izay tsy maintsy hihatra amin’Ilay Mpamonjy homen’Andriamanitra ny olona. “Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin’ny voninahiny ?” (Lioka 24:26). Izay rehetra voasoratry ny mpaminany momba ny Zanak’olona dia tsy maintsy ho tanteraka (Lioka 18:31).
Ny teny nambaran’Isaia mpaminany momba io fanginan’i Jesosy io no novakian’ilay tandapan’ny mpanjakavavin’i Etiopia, raha tonga nanatona azy i Filipo. Ny amin’i Jesosy no nambaran’ny mpaminany tamin’izany, hoy i Filipo nanazava taminy (Asan’ny Apostoly 8:32-35). Koa ny famakiana izany teny izany no nahatonga io lehilahy etiopiana io hiova fo sy hatao batisa.
Fanginan’i Jesosy, nefa fanginana miteny, fanginana mbola te hiteny aminao mandraka androany, ary te hitondra anao ho eo amin’ny lalan’ny fahamarinana sy ny fifaliana ao amin’Andriamanitra.
Ny fitiavanao lalina, ry Kristy,
Dia manohina sy manindrona ny fonay.
Maty Ianao, noho ny fahotan’izao tontolo izao ;
Ianao irery no Andriamanitra Mpamonjy anay.